इन द नेम अफ डेमोक्रेसी: ओबामाले जितेको त्यो दिनको स्मरण | usa इन द नेम अफ डेमोक्रेसी: ओबामाले जितेको त्यो दिनको स्मरण | usa
We have 2829 guests and 85 members online
Content View Hits : 36175057
इन द नेम अफ डेमोक्रेसी: ओबामाले जितेको त्यो दिनको स्मरण
Written by Diwakar Bagchand
Tuesday, 06 November 2012 13:12
Special:2photos: न्यू योर्क- राष्ट्रपति चुनाव भएपछि बराक ओबामाले एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्बोधन गरेका थिए । यो ४ नोभेम्बर २००८ को दिन थियो । सिकागोको ग्रान्ट पार्कमा दुई लाख मानिसहरु जम्मा भएका थिए । यो एउटा ऐतिहासिक दिन थियो । राष्ट्रपति चुनावको नतिजा आउन आरम्भ भईसकेको थियो ।
President Barack Obama during his 2008 election campaign. Barack Obama. Photo courtesy:WashingtonPost.Com
राष्ट्रपति चुनावका अर्का प्रत्यासी जोन मकेनले शुरुवाती बढत लिई रहेका थिए । भिडमा बेचैनी स्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यो भिड कुनै चमत्कारी नतिजाको आशा लिएर जम्मा भएको थियो । जुन सूर्यको उदयसँगै रिपब्लिकन पार्टीको उत्साह बढ्दै थियो, सूर्य ढल्न लाग्दा उत्साहमा क्रमिकरुपमा ह्रास आईरहेको थियो । साँझको अंधकारले अश्वेत ओबामाको स्वागत गर्दै परिणामको दिशा परिवर्तन गरिदियो । ओबामाले बढत लिन थाले । यो बढत यति विशाल हुन थाल्यो कि त्यहाँ उपस्थित मान्छेका आँखामा आँशु छल्कन थाले । जब ओबामाले २७० को जादुयी आँकडा स्पर्स गर्न थाले, त्यहाँ उपस्थित सर्वसाधारण हर्षले भावविभोर हुनपुग्यो । २५० वर्ष पुरानो शोषित पिडितहरुको आशा आज पूरा हुन गई रहेको थियो । चुनावकोलागि आवश्यक २७० को अंक पार हुने बित्तिकै त्यहाँ उपस्थित अश्वेत नेता जेसे ज्याक्सनले आँशु रोक्न सकेनन् । अमेरिकी जनताले फैसला सुनाई सकेका थिए ।
बराक हुसैन ओबामा अमेरिकाको ४४ औं अफ्रिकी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनिए । बुलेट प्रुफशिसाको पछाडि ओबामा नयाँ युगको सुत्रपात भएको हेरि रहेका थिए । उनले राष्ट्रको नाममा पहिलो सम्बोधन गरे । ओबामाले भने-
"यदि अझपनि कसैलाई अमेरिकामा केही असम्भव छैन भन्ने कुरामा सन्देह छ, अमेरिकी राष्ट्र निर्माताहरुको सपनाको जिवन्तताप्रति आशंका छ र हाम्रो लोकतन्त्रको तागतमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ भने यो हाम्रो जवाफ हो । यो जवाफ यस राष्ट्रका असङ्ख्यक स्कूल र चर्चहरुमा पंक्तिदरपंक्ति फैलिएको छ । यो जवाफ हो यूवा र बृद्धहरुको, धनी र गरीवहरुको, डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरुको, अश्वेत र श्वेतहरुको, ल्याटिन अमेरिकी र एसियायीहरुको, मूल अमेरिकी, समलिङ्गी र अपाङ्गहरुको । यो असङ्ख्य अमेरिकीहरुको जवाफ हो, जसले सन्देश दिएका छन् हामी रातो र निलो रङ्गका राज्यका समूह हैनौं । हामी एक हौ, सदा एक रहने छौं ।"
संयुक्त राज्य अमेरिका पुँजिवादको प्रयाय बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको उत्कृष्ट नमूना विश्व सामू प्रस्तुत गरेको मैले महशुस गरे ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको विद्यार्थीको हैसियतले यो घटनाक्रम मेरालागि निकै अर्थपूर्ण थियो । २१ औंशताब्दीको अद्भूत राजनीतिक परिवर्तन थियो यो । आजको दिनसम्म प्रजातान्त्रिक समाजवाद गरीव र शोषितहरुको एक मात्र राजनी्तिक सिद्धान्त हो जस्तो मलाई लाग्छ । आज कुनै राजनीतिक पार्टीले गरीव जनताको सेवा गर्न चाहन्छ भने त्यसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्न आवश्यक छ । सम्पन्नहरुको राजनीति सत्तामा पुग्नकालागि मात्र हुन्छ । गरीवको राजनीति सिमित हन सक्दैन । गरीवले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य सुधार्न पूरा देशको दशा सुधार्न पर्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादकाअनुसार देशको मूख्य रोग नै असमानता हो । असमानताले नेपालको प्राण नै चुसेको छ । असमानताले गर्दा नेपालको ठुलो समूह ज्ञान र कौशलविहिन भएको छ । हाम्रो समाजमा नविन काम हुन सकेका छैनन् । नैराश्यता व्यापत छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादले आर्थिक र सामाजिक शोषणको अन्त्य गर्ने वकालत गर्छ । नेपालमा जल, जंगल र जमिन आदिको समाजिक व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा बढिभन्दा बढि उत्पादन हुनु पर्छ । राजनीतिको फैसला जनताले नै गर्नु पर्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भाषणमा पाएँ, किताबमा पाएँ र नारामा पाएँ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले नेपाली समाजको सोच परिवर्तन हुन सकेन । आफुभन्दा ठुलोको बराबर बन्न चाहने तर आफुभन्दा कमजोरलाई आफ्नो बराबर हुन नदिने सोचले सिचिएको माटोमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको उन्नत विरुवा फस्ट्याउन सकेन ।
Diwakar Bagchand. Photo courtesy: Pabita Bagchand Pariyar
२००८ को युगान्तकारी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावले मलाई लोकतन्त्रको सहि अर्थ बुझाई दियो । यो ‘वैचारिक परिवर्तनको क्रान्ति’को जित थियो । यो मानव समभाव र समानताको जित थियो । यो जित एउटा सर्वसाधारण मानवको जित थियो जसले संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको राष्ट्रपति बन्ने सपना देखेको थियो । ४ नोभेम्बर २००८ का दिन अमेरिकाले जातिवाद, नस्लवाद, धनी र गरीवको विभेद, रङ्गभेद र असंवेदनाको विरुद्ध एउटा सन्देश दियो ।
आज करिब चार वर्ष बितिसक्दा यही नोभेम्बर ६ तारिखका दिन हुन गई रहेको राष्ट्रपति चुनावलाई प्रत्यक्ष अमेरिकी माटोमा बसेर हेर्ने अवसर पाएको छु । ओवामा दोश्रो कार्यकालकालागि रिपब्लिकन उमेदवार मिट रोमनीसंग भिड्दैछन । हेरौं, अमेरिकी प्रजातन्त्रले कसलाई रोज्छ ।
-Diwakar Bagchand in New York
Note: दिवाकर बागचन्द "जन सेवा श्री" चतुर्थ (२०६९) द्वारा सम्मानित नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार हुन्।
-अमेरिकि राष्ट्रपति चुनावमा नेपालीको कस्लाई समर्थन: ओबामा कि रोम्नी? ओबामा (१०१) vs रोम्नी (१५)?